Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment तिहार नजिकिदै गर्दा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग र उत्पादनमा कडाइ ! - Pnpkhabar.com
तिहार नजिकिदै गर्दा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग र उत्पादनमा कडाइ !
काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग, आयात तथा उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको जनाउँदै यस्ता गतिविधि गरे कारवाही हुने जनाएको छ ।
कुनै गुनासो वा कानून विपरीतको कार्य भएमा नजिकको सुरक्षा निकायमा खबर गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले अनुचित फाइदाका लागि हुने अवाञ्छित गतिविधिको निगरानी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । ठगी गर्ने, कानून मिच्ने, लागुऔषको प्रयोग, प्रतिबन्धित मदिराको अवैध बिक्री जस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारवाही हुनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।